Neymar Jr oo sara u qaaday dooda ka taagan mustaqbalkiisa PSG, kaddib markii uu diray farriin aan caadi aheyn – Gool FM
(Paris) 21 Agoosto 2019. Xiddiga reer Brazil iyo kooxda Paris Saint – Germain ee Neymar Jr ayaa fariin muhiim ah soo dhigay boggiisa rasmiga ah baraha bulshada ee Instagram-ka.
Fariintan uu Neymar Jr ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka ayaa waxay sare u qaaday dooda ka taagan mustaqbalkiisa kooxda PSG.
27 jirka reer Brazil ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqayo midkood kooxaha Barcelona, ​​Real Madrid iyo Juventus.
kooxda Paris Saint-Germain ayaa muujisay sida ay diyaar ugu tahay in Neymar Jr ay ku fasaxdo heshiis amaah ah xili ciyaareedkan, iyadoo qeyb kaga dhigi doonto jiritaanka dooqa ah in si toos ah loo iibsan karo dhamaadka xili ciyaareedkan, sidaasi darteed ciyaaryahanka ayaa qarka u saaran inuu ka dhaqaaqo garoonka Parc des Princes.
Waxaa adkaan doonta in Neymar Jr uu sii joogo Paris Saint-Germain, kaddib markii uu dhaleeceeno xoogan kala kulmay taageerayaasha kooxda reer France, isagoo dalbaday bixitaan deg deg ah.
Waxey u muuqataa in Neymar uu u jawaab celiyay taageerayaasha, kaddib markii uu fariin qoraal ah ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee Instagram-ka wuxuuna yiri:
“Dhibaatada jirta ayaa waxay tahay markii aad daacad noqoto qof walba wuu ku neceb yahay adiga, laakiin markii aad beenaale tahay qof walba wuu ku jecel yahay”.
Laga yaabee in farriintan ay jawaab u tahay taageerayaasha Faransiiska ee ku weerarey xiliyadii lasoo dhaafay, go’aanka uu ku doonayo inuu ku baxo, si uu markale dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona.